INDLELA YOKUVULA IIFAYILE ZERAR NGAPHAKATHI WINDOWS 10 (2021) - ITHAMBILE
Iifomathi zefayile ezigciniweyo ezinje nge.zip, .rar, .7z, .tar, njl ziluncedo olukhulu ekuphatheni nasekugcinweni kweenjongo. Iifayile ezininzi zinokubotshwa kwaye zixinzelelwe kunye kwifayile enye ekwagcina indawo yokugcina encinci kwaye ithintele ubunzima bokukhuphela okanye ukuthumela iifayile ezizezinye. Nangona, ayizizo zonke iifomati zokugcina ezinenkxaso yemveli kwiWindows OS. Zonke iinguqulelo zeWindows zikhuphe inkxaso yasemva kowe-1998 .zip iifayile, okt, enye ayidingi mntu wesithathu kwaye inokucofa kabini kwifayile ye .zip ukujonga imixholo yayo kwaye ikhuphe, kodwa ayiyonyani leyo ezinye iifomathi zefayile yogcino.
Abasebenzisi beWindows abakwazi ukuvula ngokuthe ngqo iifayile zerar kwaye baya kufuna uncedo lomntu wesithathu. Ngethamsanqa, i-intanethi izaliswe zizicelo ezinceda ukuvula nokukhupha imixholo ye .rar kunye nazo zonke ezinye iifayile zokugcina. Ngelixa inkululeko kunye nomthombo ovulekileyo 7-zip kukhethwa ngabasebenzisi abaninzi, ezinye iindlela ezithandwayo ezinje WinZip , I-WinRAR , I-PeaZip njl njl zisetyenziswa ngabaninzi. Inani lewebhusayithi livumela abasebenzisi ukuba bakhuphe iifayile zabo .rar kwi-intanethi kwaye ukhuphele imixholo okanye uguqule iifayile zer .r kwiifayile ze-.zip, uhlobo lwefayile exhaswa yiWindows OS. Kweli nqaku, siza kukunika indlela yokuhamba kwezi zicelo, kwaye ke, sikuncede ekuvuleni iifayile zerar kwikhompyuter yakho yeWindows.
Uyenza njani i-chrome ibaleke ngokukhawuleza kwiwindows 10
Indlela yokuvula iifayile zeRAR ngaphakathi Windows 10?
1. Yiya phambili utyelele iphepha lokukhuphela lazo naziphi na kwezi zixhobo zivulekileyo. Uninzi lwazo luneenguqulelo ezimbini ezahlukeneyo ezifumanekayo kwiinkqubo ezingama-32 kunye neenkqubo ezingama-64. Khuphela ifayile ye .exe efanelekileyo kwinkqubo yoyilo lwakho (Umhloli weFayile> Cofa ekunene kule PC kwaye ukhethe iiProperties ukuqinisekisa uhlobo lwenkqubo yakho). Siza kuba sisebenzisa 7-zip kwesi sifundo kodwa inkqubo yokusebenzisa ezinye izixhobo zerar ingaphezulu okanye incinci ngokufanayo.
Phawula: Abasebenzisi abaqhelekileyo banako khuphela kwaye ufake Inguqulelo yasimahla yazo naziphi na kwezi zixhobo zivelweyo, ngelixa abasebenzisi abaphambili ngakumbi abanqwenela ukusebenzisa ezi zixhobo zokucinezela iifayile kufuneka bahambe kuluhlu lwenqaku labo, thelekisa ucinezelo, njl.njl ngaphambi kokuthenga nokufaka iinguqulelo ezihlawulelweyo.
2. Nje ukuba ukhuphele kwifayile yezixhobo .exe, Cofa kabini kuyo ukuze uqalise ukufakela iwizard kwaye ulandele imiyalelo ekwi-screen ukuyifaka. Qiniseka ukuba ufake usetyenziso kwindawo yalo emiselweyo.
3. Ngoku ngoku siyifakile isoftware efunekayo, singahambela ekuvuleni ifayile ye .rar. Fumana ifayile ye .rar, cofa kuyo kwaye ukhethe Vula nge> 7-zip kwimenyu yokulandela elandelayo. Ukuba ufumana i-7-zip kwiVula ngemenyu, cofa apha Khetha enye insiza ilandelwe ngu Usetyenziso olungakumbi kwaye Khangela enye insiza kwi-PC . Jonga ku C: Iifayile zeNkqubo 7-Zip , khetha 7zFM.exe kwaye ucofe kuVule.
4. Iwindow eneziphu ezisi-7 ebonisa imixholo yefayile ye .rar kunye nezinye iimethadatha ezongezelelweyo ziya kuvulwa. Cofa apha Kucatshulwe (Ngokuzenzekelayo zonke iifayile ziyatsalwa. Ukuba ufuna kuphela ukukhupha ifayile enye okanye ezimbini, khetha eyokuqala uze ucofe ku-Khipha), nakwifestile elandelayo, setha indlela yokukhupha.
uyilungisa njani i-lag kwi-ps4
5. Indawo emiselweyo yokukhupha imiselwe ngokufanayo nendawo yangoku yefayile ye .rar. Yitshintshe ukuba unqwenela kwaye ucofe kuyo Kulungile ukuqala inkqubo yokukhupha.
Phawula: Ezinye iifayile ze .rar zikhuselwe ngegama eligqithisiweyo, kwaye uya kucelwa ukuba ungene ukuze uvule ifayile okanye ukhuphe imixholo yayo.
windows windows isoftware yokubuyisela iphasiwedi
Ixesha lokukhutshwa lixhomekeke kwinani leefayile, ubungakanani bazo, kunye nakwiimpawu zakho zePC ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Ukukhupha ifayile ye .rar kungathatha naphina ukusuka kwimizuzwana embalwa ukuya kwimizuzu eliqela. Kwakhona, awuyi kufuna ukuvula iifayile zeRAR kwi-7-zip ngexesha elizayo ngesandla, njengokucofa kabini kwifayile ye-.rar izakuyivula ngokuzenzekelayo kwisicelo esifanelekileyo!
Siyathemba ukuba eli nqaku beliluncedo kwaye ukwazile vula iifayile zeRAR ngaphakathi Windows 10 ngaphandle kwemicimbi. Ukuba usenayo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso emva koko zive ukhululekile ukufikelela ngaphandle usebenzisa icandelo lokuphawula.
windows 10 qala imenyu kunye ne-cortana engasebenziyo impazamo ebalulekileyo
Impazamo engaziwayo yenzekile (0xe80000a)
Indlela yokufaka kwakhona abaqhubi beemifanekiso windows 10
UGoogle chrome akakwazi ukunxibelelana neseva yommeleli